အသက်အငယ်ဆုံး ပရဟိတသမား သို့မဟုတ် နွေဦးသူရဲကောင်းလေး ထွန်းလင်းနိုင်… – PVTV Myanmar
အသက်အငယ်ဆုံး ပရဟိတသမား သို့မဟုတ် နွေဦးသူရဲကောင်းလေး ထွန်းလင်းနိုင်
အသက် ၁၃ နှစ် ခြောက်တန်း ကျောင်သားအရွယ်ဆိုတာ မိဘ မျက်စိအောက်မှာ နေကြရတာများပါတယ်။
အခုတော့ ခြောက်တန်းကျောင်းသားလေးက PPE ဝတ်စုံဝတ်ပြီး အလောင်းတွေ လိုက်သယ်ပေးနေပါတယ်။
မင်းအောင်လှိုင်ကြောင့် ကိုဗစ်တတိယလှိုင်း မထိန်းချုပ်နိုင်ဘဲ ကူးစက်မှုများပြီး သေဆုံးမှုများနေတဲ့ အပေါ်မှာ ပရဟိတစိတ်အပြည့်နဲ့ လိုက်ပါ ဆောင်ရွက်ပေးနေသူပါ။
ဒီလို အသက်ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ ကူးစက်မှု များပြားနေချိန် PPE ဝတ်စုံဝတ်ပြီး လိုက်ပါကူညီနေတဲ့ မောင်ထွန်းလင်းနိုင်ကို ဒီတပတ်ရဲ့ နွေဦးသူရဲကောင်း ကဏ္ဍကနေ ဖော်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်။
Like – 6.9K Share – 249
2021-08-23 at 9:50 PM
2021-08-23 at 9:57 PM
2021-08-23 at 10:02 PM
2021-08-23 at 10:28 PM
အရြယ္နဲ႕မလိုက္ေအာင္ေလးစားထိုက္ပါတယ္ခေလးရယ္ မင္းရဲ႕ဘဝေနလို လလိုထြန္းလင္းေတာက္ပပါေစ
2021-08-23 at 10:49 PM
Thidar Tun says:
2021-08-23 at 11:58 PM
Respect our hero son
2021-08-24 at 12:01 AM
Mau u been safely ur life n escape from worried ,iam wishing all the best for future.
2021-08-24 at 1:57 AM
We need to protect this kid or MAH will come get him.
2021-08-24 at 7:09 AM
Deep respect !ဘေးကင်းပါစေကလေး
2021-08-24 at 7:22 AM
Yin Win Htun says:
Nyein Wathan Tun says:
2021-08-24 at 10:19 AM
Rosezan Aye Sanchez says:
2021-08-24 at 10:58 AM
ဖူးငံု ဖူးငံု says:
2021-08-25 at 12:17 PM
2021-08-26 at 5:44 PM
ပရဟိတကို အသက္ငယ္ေပမယ့္ စိတ္ဝင္စားကူညီေပးတဲ႔ ေမာင္ငယ္ေလး ေလးစားပါတယ္
နည်းနည်းစာဖတ်နေသလိုပဲ နောက်ကသတင်းတင်ဆတ်သူ အသံက
လိုအပ်နေတာလေးကို ဖြည့်စွက်ပြောပေးတဲ့သဘောမျိုးပါဗျ အားလုံး ကျန်းမာကြပါစေ
2021-08-27 at 11:19 AM